Andramena tratra tany Singapour : Mpandraharaha malagasy arahi-maso akaiky -
AccueilRaharaham-pirenenaAndramena tratra tany Singapour : Mpandraharaha malagasy arahi-maso akaiky
Tsy misy ambonin’ny lalàna. Izay no azo ilazana ny fahatrarana ny bolabolan’andramena avy eto Madagasikara tany Singapour. Araka izany, niakatra fitsarana tany Singapour ny raharaha fanondranana an-tsokosoko andramena avy eto Madagasikara, ny 30 Marsa teo. Tamin’izany indrindra no nanamelohan’ny Fitsarana Avo tao Singapour ny orinasa mpanondrana sy ny tompony. Marihina fa bolabola miisa 30 000 ity tratra ity ary manodidina ny 50 tapitrisa Dolara ny vidiny.
Hatreto, mbola misokatra ny fanadihadiana atao mahakasika ity fanondranana bolabolan’andramena an-tsokosoko ity. Hisy raharaha hosokafan’ny fitondram-panjakana ato ho ato satria, raha ny fanadihadiana natao dia fantatra fa misy mpandraharaha malagasy tafiditra amin’izany. Noho izany indrindra, arahi-maso akaiky ity mpandraharaha malagasy niray tsikombakomba tamin’ny fanondranana ity. Izany hoe, havoakan’ny fitondram-panjakana sy ny governemanta malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana atsy ho atsy ny anaran’ireo mpiray tsikombakomba malagasy ireo.
Ankoatra izay, nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo ao Singapour ny Fitondram-panjakana malagasy, izay manamarika ny fanohanany ihany koa ny CITES. Raha ny marina, nahazo fandresena ny fanjakana malagasy tamin’ity raharaha fahatrarana bolabolan’andramena marobe tao Singapour ity. Marihina fa mikatsaka hatrany ny famongorana sy fanenjehena ireo mpandraharaha mpanondrana an-tsokosoko ny harem-pirenena, toa ny andramena, sokatra, volamena, sns, ny Fanjakana malagasy ankehitriny. Nambaran’ny Fanjakana malagasy tamin’ny Fitsarana Avo tao Singapour fa tsy ara-dalàna ary tsy nahazoana alalana io fanondranana io.
Etsy andaniny, hiara-hiasa amin’ny Fanjakana Singaporianina ny Fanjakana malagasy amin’ny fampodiana ireo bolabolan’andramena tratra ireo.